Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Wayaanaha oo Aad Loogu Dhaleeceeyay Xasuuqii Waldia.
Taliska Wayaanaha oo Aad Loogu Dhaleeceeyay Xasuuqii Waldia.
Waxaa iska soo daba dhacaya cambaaraynta loosoo jeedinayo taliska wayaanaha iyo ciidamadiisa bahalka ah ee loo carbiyay gumaadka dadka shacabka ah ee aan isdifaaci karin.
Dowlado dhowr ah iyo ururo badan ayaa aad udhaleeceeyay falkii foosha xumaa ee kadhacay Dagmada Walidia ee woqooyiga Gobolka Axmaarada kaas oo dad shacab ah oo labaatan iyo dhowr ah lagu xasuuqay.
Isbahaysiga PAFD oo ay kujirto Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa cambaareeyay xasuuqii magaalada Waldia kadhacay kaas oo lagu xasuuqay dad shacab ah oo rabitaankooda muujinayay.
Sidoo kale culimada diimaha sida Muslimkaiyo Kirishtanka ayaa siwada jir ah u dhaleeceeyay falkii foosha xumaa ee ciidanka wayaanuhu ay kagaysteen magaalada waldia iyo guud ahaan xasuuqa wadanka kasocda.
Dhinaca kale waxaa cambaarayn tan lamid ah soo saaray hay’adaha xuquuqul insaanka sida Amnesty Internatioan iyo kuwa kale kuwaas oo dhamaan tood xusay in taliska wayaanaha lagula xisaabtami doono dhibaatooyinka uu ugaysanayo dadka shacabka ah ee aan isdifaaci karin.
Ururada bulshada ayaa dhankooda aad u cambaareeyay xasuuqii ugu dambeeyay ee Walidia iyo guud ahaan gumaadka kasocda wadanka, gaar ahaa Gobolada Axmaarada, Oromada iyo wadanka cunaqabataysan ee Ogadenia.